FALAQEYN:Somaliland oo saameyn ku yeelan doonta doorashada 2021 & Is badal dhici kara
February 12, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 2
HARGEYSA(P-TIMES)- Kadib kulankii shalay ku dhex maray magaalada Addis Ababa ee caasimada Ethiopia madaxweynaha dowladda federaalka Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo hor dhac u ahaa arimo badan ayaa waxaa is badal weyn uu ku yimid deegaanada Somaliland.
Isbadalkani oo salka ku haya arimaha siyaasada iyo dhaqaalaha labada dhinac ayaa Somaliland u horseedi kara geedi socod cusub, waxaana dowladda federaalka oo ka duulaysa hirgalinta doorasho qof iyo cod ah iyana u fududaan karta in ay saamayn toogan ku yeelato arimaha siyaasada Somaliland.
Shacab weynaha ku dhaqan Somaliland iyo xisbiyada mucaaridka ah oo hore ugu qanacsanaa in lala heshiiyo dowladda dhexe ayaa haatan heli doona fursado cusub oo ay ku sameeyaan galaan gal hor leh, waxaana suurta gal ah in labada dhinac ay kawad shaqeeyaan arimaha dhaqaalaha iyo doorashooyinka ka kala dhici doonta dalka halka Somaliland ay heli doonto dhaqaale badan oo hore uga xanibnaa, kuwaas oo go’doon looga galiyey khilaafka kala dhaxeeya dowladda.
Madaxda dowladda ayaa iyaguna la shir tagi doona siyaasad cusub oo ay ka gadaan caalamka si kalsooni buuxda ay uga helaan Beesha Caalamka iyo dalalka daneeya arimaha Soomaaliya oo il gaar ah u haya arimaha muranka badan dhaliyey ee u dhaxeeya Somaliland iyo Somalia.
Somaliland ayaa dhankeeda heli doonta deeqo kala duwan iyo dhaqaale badan oo ay ku heli doonto magaca Somalia oo hore ay uga carari jirtay, waxaana iman kara dabacsanaan dhanka maamulka ah.
Doorashada soo socota 2021 ee dalka ka dhici doonta ayaa iyaduna laga yaabaa in ay kasoo dhex muuqdaan siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda deegaanada Somaliland si meesha looga saaro kala aragti duwanaanshaha u dhaxeeya labada dhinac.
Hay’addaha samafalka, Beesha Caalamka iyo dowladdaha daneeya arimaha Somalia ayaa iyaguna ku dhiiran doona in Somaliland iyo Somalia ay u wada wajahaan qaabka sidii hal dal oo kale iyada oo la marayo hanaankii wax qaybsi ee sanadkii 1960kii si layskugu soo dhoweeyo bulshada labada dhinac.
Muhiimada ugu weyn ayaa ah in laga wada shaqeeyo mustaqbalka dalka iyo helida dowladd midaysan oo wada gaadha Somalia oo dhan, waxaana dowladda federaalka ka dagi doona culaysyo badan oo haatan ka haysta dhanka dowladd goboleedyada iyo Beesha Caalamka maadaama xiisad ay kala dhaxayso dowladda qaar kamid ah dowladd goboleedyada.
Isku gooshida, isu socodka bulshada iyo kor u qaadida dhaqaalaha dalka ayaa isbadal ku iman karaa, waxaana bulshada Somaliland ay heli doontaa xorinimo dheeraad ah oo ku aadan qiyaasida afkaartooda dhanka Somalia taas oo meesha ka saari doonta in xabsiyada lagu guro cid walba oo taageerta dowladda amaba booqata magaalada Muqdisho.
Qaybsiga khayraadka dalka iyo helida dhaqaale badan oo ku baxa magaca Somalia oo Somaliland ay ka qatan tahay ayaa albaabadu u furmi doonaan, waxaana dhanka sharciga hadii laga eego Somaliland loo aqoonsan doonaa dowladd goboleed kamid ah maamuladda ka jira gudaha dalka kaas oo si dadban ula dhaqan doonto dowladdu ilaa uu ka yimaado isbadal weyn oo badala qalbiyada shucuubta lagu qafilay aragtida ah in Somaliland ay tahay dal raadinaya madax banaani dheeraad ah.
Qodobadan iyo kuwo kale ayaa hirgali kara hadii hogaamiyaasha Somalia iyo Somaliland ay wada qaataan heshiis dhab ah isla markaasna laga midha dhaliyo waxyaabaha ku xeeran si mustaqbal midaysan ay u yeelato Somalia oo dhan.
Abdillahi Bashe says:
Taxliilin fiican waaye laakiin wax tixraac ah oo noo cadeen kara inaybaidaas Ku heshiiyeen nabaad tusin
Markaa waxaanbkeliyabu arkaaa niyad sami iyo rajo hafalkaaga mundane.
Soomaliduna inaybayagu heshiyaanbbaabroon intii dalalkale wax u dhoodhoobiblahaayeen
Dhoodhoob meel ma lagu gaari karo
Dalalka cadiwga ahi xaal inooma keeni karaan
Cal Adam hersi says:
Tani waa fikirka Puntlandtimes lkn Somaliland marna kama tanasulayso qadiyadda madaxbaninadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland